Mauro Icardi oo si Caro leh uga Jawaabay Su.aal laga weydiiyey Real Madrid? | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Mauro Icardi oo si Caro leh uga Jawaabay Su.aal laga weydiiyey Real Madrid?
(05-12-2017) Weeraryahanka Inter Milan ee Mauro Icardi ayaa jawaabo cadho leh ka bixiyey su’aalo laga weydiiyey warar ku xidhiidhiyey inuu u wareegayo kooxda reer Spain ee Real Madrid.
Mauro Icardi oo u warramay wargeyska Telefe, ayaa waxa uu sheegay inuu rajaynayo in lagu daro xulka qaranka Argentina ee ka qayb-geli doona koobka adduunka badhtamaha sannadka dambe lagu qaban doono waddanka Ruushka. Sidoo kale, waxa uu xusay in wax walba uu u hurayo kooxdiisa Inter Milan oo uu wakhtigan ka tirsan yahay, isla markaana aanay jirin koox kale oo uu wada-hadal kula jiro.
Icardi oo arrimahaas ka hadlaya waxa uu yidhi: “Haddii laygu yeedho xulka qaranka Argentina waxay ka dhigan tahay in laygu abaalmariyey shaqadii badnayd ee aan u qabtay Inter Milan. Wax kasta si fiican ayay u socdaan, waxaanan rajaynayaa inaan sii wado dhalinta goolasha illaa dhamaadka xili ciyaareedka. Waana inaan goolal dhaliyo haddii aan jecelahay inaan Ruushka (Koobka Adduunka) tago.”
Wariyaha waraysiga ka qaadayey Icardi ayaa waxa uu markaas kaddib weydiiyey su’aal ku saabsan inuu u wareegayo Real Madrid iyo in kale iyo waliba inuu jiro wada-hadal dhexmaray, waxaanu ku jawaabay: “Real Madrid? Halkan Talyaaniga ayaan ku faraxsanahay. Waxa aanu nahay kooxda hoggaaminaysa horyaalka, aniguna waxaan ahay gool-dhaliyaha ugu goolasha badan, maxaa kale ee aan doonayaa?.”
Icardi ayaa xili ciyaareedkan waxa uu kooxdiisa Inter Milan u dhaliyey 16 gool, 15 ciyaarood oo uu saftay, waxaana uu kulankii Chievo ku galay taariikhda Inter Milan oo uu noqday ciyaartoygii 10-aad ee ugu goolasha badnaa abid, waxaanu la sinmay Mario Corso oo booskaas ku jiray, iyadoo uu hiigsanayo Meazza oo goolashii ugu badnaa u dhaliyey kooxdaas abid, kuwaas oo tiradoodu tahay 284 gool.